ARETINA « CORONAVIRUS » : Nohararaotin’ireo tsy mataho-tody ny mahazo ny Malagasy
Taorian’ny fanambaràna ofisialy notanterahin’ny Filoha Andry Nirina Rajoelina mikasika ny fidiran’ny valanaretina covid-19 entin’ny « Coronavirus » eto Madagasikara, ny zoma 20 marsa lasa teo iny dia samy nandray fepetra avokoa ireo ankohonana maro manerana ny Nosy. 23 mars 2020
Areti-mandoza efa nahafaty olona maro toy ny tao Sina, Espana, Italia sy ny maro hafa… ny Coronavirus. Mivarahontsana tanteraka izao tontolo izao, tafiditra ao anatin’izany i Madagasikara ankehitriny. Olona miisa 03 izay nahitana ny soritr’aretina no nambaran’ny Filoham-pirenena voalohany tamin’io fotoana io ka samy tokony hitandrina avokoa ny tsirairay manomboka eto. Efa nivonona tanteraka noho izany ny fanjakana ary efa nametraka ny paikady sy fandaminana rehetra handraisana ny marary.
Eo koa ny fanidiana ny sisin-tany, fanajanonana ny fampianarana, raràna ny famoriam-bahoaka na aiza na aiza, mihidy hatramin’ny Fiangonana. Mandritra ny 15 andro aloha ny fepetra noraisina ka hita eo indray izay mety ho fivoarany. Miantso ny Malagasy rehetra ihany koa ny Filoha mba samy ho tony manoloana ny toe-draharaha satria dia efa mitady ny vahaolana arak’izay tratra izy ireo amin’izao fotoana izao. Maro anefa ireo vaovao miparitaka vao mainka nampiteraka ny savorovoron-tsaimbahoaka saingy tokana ihany ny tokony harahin’ny vahoaka Malagasy iray manontolo dia ireo toromarika apetraky ny fitondram-panjakana. Ilaina fitoniana ny fiatrehana izao aretina izao.
Tsy mitsahatra mampitandrina sahady ny olona milaza vaovao tsy marina, manakorontana saim-bahoaka hatrany moa ny eo anivon’ny mpitandro filaminana, manara-maso akaiky ny raharaha izy ireo.
Niaka-bidy avokoa ireo entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro
Ny sabotsy 21 marsa lasa teo, nandeha nivoaka ny trano nanangona ireo entana tokony ho ilaina amin’ny fiainana andavanandro avokoa ny ankabeazan’ny mponina teto an-drenivohitra, eny fa na hatrany amin’ny Faritra aza. Entin’ny tahotra loatra ny olona, hany ka nanao izay ho afany nanangona izay azon’ny vola teny am-pelatanana aloha. Ny mampalahelo dia ireo tsy mba afaka manao izany satria na ny sakafo hohanina anio aza efa mila tsy ho hita. Mbola tsy fantatra anefa hatreto izay mety ho fivoaran’ny fiparitahan’ny aretina.
Etsy ankilany dia toa sahy manararaotra izay tsy izy mampiakatra ny vidin’entana ireo mpivarotra. Tonga amin’ny fitenenana hoe « manararao-paty, ny areti-mandoza efa mampihoron-doha, toa zaran’ireo tia kely hamenoana ny paosiny indray ny toe-java-misy » . Maro ireo nitaraina kanefa tsy afa-manoatra noho ny tahotra diso tafahoatra, eny fa na dia misy aza ny laharana an-tariby napetraky ny eo anivon’ny Minisiteran’ny varotra sy ny Indostria azo antsoina raha sendra ka mahita tranga fanararaotana mahazo ny mpividy dia maro no tsy nahavita niantso ny laharana intsony fa dia nanaiky ny fanararaotana natao azy ireo.
Teto Antananarivo, toy ny teny amin’ny tsenan’Andravoahangy sy tsenan’Anosibe , Ambohipo sy ny hafa izao dia niakatra avo roa heny ka hatramin’ ny dimy heny any ho any mihitsy ny vidin’entana nandritra io sabotsy tontolo io, nifanitsa-kitro ny olona, nilaharana hatramin’ ny lasantsy mihitsy aza, nisy mantsy ireo nikasa ny hody any ambanivohitra ary maro no efa lasa nifindra monina. Tranga hita teny ho eny ny fahamaroan’ny olona handeha hody teny amin’ny toby fiantsonana Andohatapenaka sy ny teny amin’ny Fasan’ny karàna iny faran’ny herinandro lasa teo iny hatrany.
Tsy taka-bidy intsony ny sakamalao, tongologasy, voasary makirana…
Nidangana izay tsy izy, saro-tadiavina toy ny volamena mihitsy teto ny sakamalao, tongologasy, voasary makirana. Nampiakatra ny vidin’izany daholo noho izany ireo mpivarotra manerana an’i Madagasikara fa toa hoe : « miaro sy misoroka ity areti-mandoza ity ny fihinanana azy ireo isan’andro, hany ka dia nikasa ny hanangona izany avokoa Ramalagasy kanefa ny mpanararaotra nanao ny nataony ihany eo anatrehan’ny raharaha ». Lasa 15000 Ariary ny kilaon’ny voasary makirana raha toa ka roa arivo ariray ny kilao teo aloha teo, arivo Ariary be izao ny singany.
Niakatra roa arivo sy iray alina Ariary ny kilaon’ ny sakamalao raha toa ka efatra arivo Ariary ny kilao teo aloha, roa alina Ariary kosa ny kilaon’ny tongologasy raha valo arivo Ariary izany teo aloha. Ny vary efa tsy nahitana firy intsony teny amin’ny mpamongady. Betsaka araka izany ireo nimenomenona eo anatrehan’ny tranga satria dia toa sahy tsy mifampitsinjo intsony ny Malagasy nefa ao anatin’ny ady sarotra no lalovan’ny Firenena.
Nilaharana izay tsy izy ny fivarotam-panafody
Tranga hita nandritra iny faran’ny herinandro teo iny ihany koa ny filaharam-be teny anivon’ny fiavarotam-panafody maromaro teto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ny vitamine C sy fanampenam-bava ary koa fanasan-tanana no tena be mpitady nilaharana tamin’io fotoana io. Ao anefa ireo fiavarotam-panafody nilaza fa tsy manana intsony ny ankabeazany, ny vidiny rahateo koa efa niakatra tsy hay vidiana sady tsy takatry ny besinimaro intsony. Nisy tamin’ireo tokantrano sasantsasany moa no tonga dia nisafidy nanamboatra ny fanampenam-bava rehefa tsy nahita intsony.
“Misokatra ny zotra nasionaly, hiverina ny sidina mankany ivelany” FEPETRA ARA-PAHASALAMANA (392) 21 septembre 2020 Sarona ilay miaramila mpamatsy basy sy mpiray tendro amin’ny jiolahy ANTSIRANANA (121) 24 septembre 2020 Tsy nandrenesam-peo intsony ny Fitsarana Malagasy RAHARAHA RABEKOTO RAOUL (116) 24 septembre 2020 Maty voatifitra i Sopa mpamaky fasana sy efa nahafaty zandary ANTSALOVA (97) 22 septembre 2020 Potiky ny afo koa ny Sekoly “Notre Dame de Lourdes” MANJAKANDRIANA (90) 21 septembre 2020 Nodimandry teo amin’ny faha-82 taonany Ramahafadrahona ZAVAKANTO (78) 22 septembre 2020